२०७४ साललाई के कारणले सम्झनुहुन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः वैशाख १, २०७५ - साप्ताहिक
०७४ सालमा मेरो व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सफल रह्यो । अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा सांगीतिक शो गर्ने अवसर जुट्यो भने न्युजिल्यान्डमा प्रथम पटक शो गरे । धेरै देशको सांगीतिक यात्रा गरे । राष्ट्रले ७ जना मुख्यमन्त्री पायो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । थोरबहुत नोक्सानलाई बिर्सने हो भने म यो वर्षलाई देशले कहीं न कहीं फड्को मारेको वर्षका रूपमा सम्झन्छु ।
२०७४ सालमा मैले छक्कापञ्जा–२ र शत्रुगतेमा काम गरेँ । दुवै चलचित्र सफल भए । यसपालि प्रदर्शनमा आएका मध्ये धेरैजसो नेपाली चलचित्रले राम्रो व्यापार गरे । यो वर्ष चलचित्र क्षेत्रमा कर्पोरेट लेभलको पनि ध्यान गएको वर्ष हो । त्यसैले म यो वर्षलाई नेपाली चलचित्रको स्वर्णकालका रूपमा सम्झन्छु ।
यो साल मेरा धेरै गीत–संगीत सार्वजनिक भए भने मैले देश तथा विदेशका थुप्रै सांगीतिक यात्रासमेत गरेँ । यो वर्ष नेपाली क्रिकेटले एकदिवसीय मान्यता पायो अनि देशले पनि स्थायी सरकार प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले २०७४ सालस्मरणीय वर्ष हो ।
मैले यो वर्ष कोहलपुर एक्सप्रेस निर्माण गरेँ । मैले आजसम्म अभिनेत्रीका रूपमा मात्र काम गर्दै आएकी थिएँ, तर यही वर्ष निर्मात्रीका रूपमा काम गर्दाको अनुभव बटुल्ने मौका पाएँ, जसका कारण मेरा लागि २०७४ साल विशेष छ ।
मैले यो वर्ष ४ वर्षदेखि रोकिएको मोडलिङ यात्रा पुन: प्रारम्भ गरेकी छु । मैले २०७४ सालमा मोडलिङ गरेका भिडियोहरूले युट्युबमा राम्रै भ्युअर्स पाइरहेका छन्, जसले गर्दा मेरो व्यस्ततासमेत बढेको छ । म यो साललाई आफ्नो जीवनको स्वर्णिम वर्षका रूपमा सम्झिरहनेछु ।
२०७४ साल आनन्दित र प्रफुल्लित रूपमा बित्यो । यो साल मैले जुनजुन काम गरेँ त्यसमा राम्रै सफलता पाएँ । यो वर्ष ‘घोडचढी’ नाटकमा ललिताका रूपमा अभिनय गरेँ । मैले उक्त अभिनयबाट राम्रो प्रशंसा पाएँ, जसले गर्दा म यो सालदेखि आत्मनिर्भर भएकी छु ।
देशका लागि स्थिर सरकार, मेरा लागि दुईवटा ब्लक बस्टर चलचित्र ‘छक्का पन्जा–२’ र ‘शत्रुगते’ ।
दीपकराज गिरी, निर्देशक एवं निर्माता
‘साइँली...’ गीत र त्यसको म्युजिक भिडियो हिट भएको वर्षका रूपमा ।
गौरव पहाडी, अभिनेता
तीन तहको निर्वाचन, ७ प्रदेशमा प्रदेश सरकार तथा केन्द्रमा नयाँ सरकार बनेका कारण ।
जितु नेपाल, हाँस्यकलाकार
२०७४ लाई उपलब्धिमूलक वर्षका रूपमा सम्झन्छु । मेहनतका कारण पढाइमा पनि सफलता प्राप्त भयो भने मैले आफूलाई धेरै कुरामा निखार्न सकें ।
तीनवटा महानिर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबैको चुनाव सकेर देशले स्थायी सरकार प्राप्त गरेका कारणले सम्झन लायक छ । व्यक्तिगत रूपमा रेडियो कान्तिपुरको स्टेसन म्यानेजरमा नियुक्ति, एलजी फिल्म एवार्डको आयोजना तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतको राजकीय भ्रमणमा कलाकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाइयो ।
डिनेश डिसी, सञ्चारकर्मी
मैले यो वर्ष छविराज ओझाले निर्माण गरेको चलचित्र ‘मंगलम’ मा अभिनय गरेँ । उक्त चलचित्रमा मैले जुन भूमिकामा अभिनय गरेँ त्यसलाई दर्शकहरूले निकै रुचाइदिनुभयो । त्यसैले म यो वर्षलाई विशेष मान्छु ।
यो साल गीत लेखनका दृष्टिले अर्को माइलस्टोन सावित भयो । मेरो ‘रुपै मोहनी’ गीत सर्वाधिक हिट भयो । त्यसकारण २०७४ मेरा लागि स्मरणीय वर्ष हो ।
यसपालि देश विदेशका थुपै्र सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाएँ ।
मैले नेपाली चलचित्रमा पहिलो पटक निर्माताका रूपमा काम गरेँ र सफल पनि भएँ । अर्को कुरा मैले काठमाडौँमा एउटा घडेरी किनेँ, त्यसैले मैले यो साललाई विशेष रूपमा लिएकी छु ।
‘भद्रगोल’ मा अभिनय गरेका कारण थुप्रै म्युजिक भिडियोदेखि चलचित्रसम्मबाट काम गर्ने अफर पाएँ ।
रक्षा श्रेष्ठ, अभिनेत्री
मेरा लागि यो वर्ष कविता कन्सर्टको वर्षजस्तै भयो, किनभने २०७४ सालमा मैले जति काम गरेँ त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै आनन्द आएको भनेको कविता कन्सर्ट गर्दा नै हो । त्यसैले मैले यो वर्षलाई खास वर्षका रूपमा लिएको छु ।
नवराज पराजुली, कवि
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यन्वयनको चरणमा गयो । म यो वर्षलाई संघीयता संस्थागत भएको वर्षका रूपमा सम्झन्छु ।
ठाकुर बेलवासे, साहित्यकार
ठूलो दुर्घटनाबाट बाँचे, योभन्दा सम्झनालायक के हुन सक्छ ?
बुवा बन्ने अवसर प्राप्त भएकाले ०७४ साल मेरा लागि विशेष रह्यो ।
सुशान कँडेल, गायक
०७४ साल मेरा लागि ठीकै रह्यो, विशेष रूपले सम्झनुपर्ने केही छैन ।
मेरो सांगीतिक जीवनकै अत्यधिक सफल वर्षका रूपमा सम्झन्छु । यसबाहेक देशले स्थायी सरकार तथा नेपाली क्रिकेटले एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्‍यो ।
०७४ ले मलाई धेरै पाठ सिकाएको छ, त्यसैले यो वर्षलाई सम्झने धेरै कारण छन् । त्यसमाथि मेरा लागि विशेष रहेको चलचित्र ‘पर्व’ पनि यही वर्ष प्रदर्शनमा आयो ।
संस्थागत रूपमा हेर्दा नेपाली गीत–संगीतको रोयल्टी व्यवस्थापनका हिसाबले ०७४ सालले नवीन युगमा फड्को मारेको छ ।
तुलसी पराजुली, गायक
मेरो कामको मूल्यांकन भएर बेस्ट एवार्ड पाएको वर्षका रूपमा सम्झन्छु ।
सृजना सुब्बा, नायिका
चलचित्र विकास बोर्डको पहिलो महिला अध्यक्ष हुन पाउनु आफैंमा उपलब्धि रह्यो, तर महिला हुनु मात्र मेरो गुण होइन भन्ने प्रमाणित गर्न हाम्रो टिमले सुरु गरेका कामजस्तै बक्स अफिस, इ–टिकेटिङ, पुराना चलचित्रको डिजिटलाइजेसन, फिल्म फेस्टिबलजस्ता केही कामको सुरुवात हुनु र केही प्रक्रियामा जानुले मैले मात्र होइन, सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रले नै ०७४ लाई सम्झनुपर्छ ।
बाध्यतावश परदेशमा रहे पनि मेरो मुख्य रुचि भनेकै संगीत हो । त्यही भएर विदेशमा श्रम गरेर बचेको थोरै समयमा पनि संगीत सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । यही सिलसिलामा ०७४ मा मैले संगीततर्फ ‘विन्ध्यवासिनी संगीत एवार्ड’ प्राप्त गरे । यही नै बिर्सन नसक्ने सुखद कुरा हो ।
डीआर अटु, गायक
विशेष गरी चलचित्र ‘भैरे’का दुईवटा गीत नै १ करोड भ्यू पाएर सफलताको बाटोमा लागे । मेरो कमब्याक दरिलो रह्यो । जीवनमै पहिलो पटक चलचित्र भैरेमा संगीत दिन पाएँ ।
खासै सम्झनलायक केही छैन । तैपनि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले स्थायी सरकार दियो । अब देश विकासले गति लिएर नेपालको मुहार फेरियो भने पक्कै पनि ०७४ साल सम्झनलायक हुनेछ ।
खासै विशिष्ट केही छैन । यो वर्षले देशको उन्नतिका लागि केही सकारात्मक संकेत भने देखाएको छ ।
विकास आचार्य, निर्माता/निर्देशक
राजनैतिक तरलता समाप्तिको प्रयास वर्षका रूपमा सम्झनुपर्छ यो वर्षलाई ।
केदार घिमिरे, हास्य कलाकार
यो धेरै महत्वपूर्ण काममा उपलब्धि हासिल भएको वर्ष हो ।